Iindaba - Fi Yurophu 2019 - Izithako zokutya kunye neMiboniso yeTekhnoloji
Ulwandle lweHlabathi luzimase izithako zokutya iYurophu ka-2019 ukusukela ngomhla wama-5 ukuya ku-5 ukuya kowama-2019 eParis, eFrance.
Ixesha leMiboniso: 3- 5 Dec 2019
Indawo yomboniso: EParis, eFrance
I-Fi Yurophu, iququzelelwe kabini ngonyaka yi-UBM International Media, ibanjelwe eParis, eFrance, ngo-2019 Lo mboniso sisiganeko samazwe aphesheya ngokwenene kwizithako zokutya nakwimveliso yetekhnoloji. Kwiintsuku nje ezi-3, uya kudibana namathuba amaninzi oshishino kunokuba ucinga. Uyakube ujikelezwe ngamaqabane okwenyani, athembekileyo kunye neengcali.Yakha ubudlelwane obomeleleyo beshishini kwaye ungaze uphoswe lelona thuba lilungileyo lokuthengisa kwihlabathi liphela.
Okwangoku, lo mboniso ngowona mqokelelo mkhulu wezinto zokutya, abathengisi bezithako zobuchwephesha, umboniso wobungcali bobathathu, ibe yindawo yezithako zokutya zolwazi oluphezulu lwengqungquthela ephezulu yezorhwebo. iye yaxabiswa ngokuthe ngcembe yimakethi yamazwe aphesheya ngenxa yeendidi zazo ezityebileyo, ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi.Amashishini ezinto zokutya ekwazisweni kwetekhnoloji yamanye amazwe kunye neemveliso ngaxeshanye, ikwandisile iinzame zokujonga imakethi yamanye amazwe. yamashishini Chinese inxaxheba mboniso kule minyaka, kuye kwaba ukuvumelana kwamashishini ezininzi ukutya izithako ukwandisa imarike phesheya nokuphucula ukhuphiswano kurhwebo lwamazwe ngamazwe ngokusebenzisa lo mboniso.
Ngommandla opheleleyo weemitha zesikwere ezingama-80,000, umboniso wango-2017 utsala ngaphezu kwe-1,800 yababonisi kunye nangaphezulu kweendwendwe ezingama-26,000 ezivela kumazwe nakwimimandla eyi-119, i-78% yabo inamalungelo okuthenga kunye ne-29% yabo enebhajethi engaphezulu kwama-500,000 eeuros.